प्रताप दासको आवाजमा चर्चित गीत‘फोटो फिरिममा’ यस्तो बन्दै छ भिडियो ? – Hamrosandesh.com
प्रताप दासको आवाजमा चर्चित गीत‘फोटो फिरिममा’ यस्तो बन्दै छ भिडियो ?
दुनियाँ डिजिटलमा लिप्त भएको छ । यस्तै अवस्थामा नेपालीहरु पनि खुबै रमाईरहेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको सामाजिक संजालको लोकप्रियतासंगै आफुलाई पनि लोकप्रिय बनाएको धेरै उदाहरणहरु नेपालमा छन् । यस्तै माध्यमका कारण नेपाली संगीत उधोगलाई पनि केही माथी उठ्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्न सफल भएको बुझ्न सकिन्छ । यता सामाजिक संजालकै माध्यमबाट सबैको मुखमा झुन्डिन सफल गीत हो फोटो फिरिममा ।
हाल यो गीतको मेल भर्सन पनि रेकर्ड गरिएको छ । रचना रिमालको आवाजमा रहेको फोटो फिरिममा रे युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक संजालमा सर्वाधिक चर्चा बटुल्न सफल भयो । त्यो पनि अत्यन्तै छोटो समयमा । नेपाल आईडलबाट चर्चाको सिखर चुम्दै गरेकी रचनाको स्वरलाई सबैले वाहवाही गरिरहेको बेला यो गीत युट्युबमा सार्बजनिक गरिएको थियो ।
सार्बजनिक पश्चात् सबैको मुखमा झुन्डियो । तर, भिडियोले भने गीत अनुसारको त्यति उत्कृष्ट नबनेको प्रतिक्रिया पाएको थियो । शिशिर भन्डारीको शब्द तथा अभिनय रहेको सो गीतको मेल भर्सनमा नेपाल आईडलबाटै चर्चामा आएका गायक प्रताप दाशको स्वर भरिएको छ । फिमेल भर्सनको भिडियोमा आएको प्रतिक्रिया र कमजोरीलाई सुधार गर्दै मेल भर्सनको भिडियोलाई सक्दो न्याय र राम्रो भिडियो निर्माण गर्ने शिशिर भन्डारीले बताए ।
प्रतापको स्वरमा गीत रेकर्ड पनि भैसकेकोले अब भिडियो छायांकनको तयारिमा रहेको अबको १५ दिन भित्रमा भिडियो सार्बजनिक गरिसक्ने भन्डारीले बताए । भिडियोमा भन्डारी नै फिचर्ड रहनेछन भने फिमेल मोडलमा रिस्ता बस्नेतलाई फाईनल गरिएको छ । रचनाको स्वरमा रहेको गीतको भिडियाई ३ महिनाको अबधिमा ४२ लाख भन्दा बढिपटक हेरिएको छ भने १ लाखले लाईक गरेका छन् । ९ हजार बढी प्रतिक्रिया आएको भिडियोमा ३२ सय बढिले डिसलाईक गरेका छन् । यता टिकटकमा पनि ५० हजार भन्दामाथी भिडियो बनेको छ ।